देशको आर्थिक विकासमा प्रदेशहरूको सक्रियता
मुलुकमा संघीयता आयो तर प्रदेश कसरी चलाउने अनुभव छैन । स्रोतको अभाव देखिन थालेको छ । प्रदेशहरूले आशालाग्दो काम पनि खासै गरेको पाइँदैन । हाम्रो मुलुकमा हीरा, मोती, सुन, चाँदीको खानी छैन । हामीसँग भएको भनेका जलस्रोत नै हो । कृषि र पर्यटनबाट आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । तर, यसतर्फ प्रदेशहरूले खासै काम गरेको पाइँदैन ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकार चलाउनेहरूलाई भत्ता खुवाउनैपर्‍यो । स्थानीय तहलाई पनि बजेट दिनैपर्‍यो । संघीय सरकारको खर्च पनि घटेको छैन, बढेको छ । सबै तहका सरकारका लागि रकम कहाँबाट ल्याउने त ? सजिलो उपाय भनेको जनतालाई करमा कस्ने हो । यही कारणले करको दायरा र दर दिनहुँ बढिरहेको छ । हुन त कुनै पनि मुलुकले कर नलीकन विकास गर्न सक्तैन । मानिसले मुनाफा गरे अनुसार र सरकारले सहुलियत दिएअनुसार कर लिनु स्वाभाविक हो । तर, यसको बदलामा सरकारले सर्वसाधारणलाई पनि सहुलियत र सुविधा दिनुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइँदैन । अर्थात् ज्यादै कम सुविधा दिएको छ ।
फोहोरको समस्या सुल्झेको छैन । सडकको दुरवस्था सधैं उस्तै छ । एउटा ट्राफिक बत्ती बाल्न सक्दैन । महँगी नियन्त्रण गर्न पनि सक्दैन । जनताका आधारभूत आवश्यकता पहिला पूरा गर्नुपर्ने हो । त्यसपछि ठूलाठूला महत्त्वाकांक्षातिर लाग्नुपर्ने हो । तर, देश हाँक्नेहरूले यस्को तहबह मिलाउन जानेनन् । लाग्छ, मुलुकमा अझै असली प्रजातन्त्र आएको छैन ।
प्रदेशहरूको विकासका लागि त्यहाँ राम्रा राम्रा नीति ल्याउन कसले रोक्यो ? कृषि तथा पर्यटनको विकास गर्ने अवरोध बन्यो ? तर, सरकार आफै युवा पुस्तालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रोत्साहन गरिरहेको छ । कृषि गर्न चाहनेहरूलाई कृषि सम्बन्धी ज्ञान, ऋण आदिको व्यवस्था छैन । संघीयतामा यस्तो काम प्रदेश सरकारको हो । अब प्रदेश सरकारहरू अघि बढ्नु आवश्यक छ । अन्यथा प्रदेश सरकार भनेको भत्ताका लागि संघ सरकारहरूको मुख मात्र ताकी राख्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
प्रदेश सरकारहरूले पर्यटनमा मात्रै ध्यान दिए पनि ठूलै सफलता मिल्ने देखिन्छ । पर्यटनको विकास गर्न सके प्रदेश सरकारले अरूको मुख ताक्नु पर्दैन । प्रदेशहरूको विकास नै देशको विकास हो । प्रदेश सरकारमा इच्छाशक्ति हुने हो र इमानदार भएर अघि बढ्ने हो थुप्रै काम गर्न सक्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा सरकार, प्रदेश सरकार र जनता सक्रिय हुने हो भने देशको विकासमा टेवा पुग्नेछ ।